Warshadda Soo-saarka Shiinaha Lightall Stadium LED iyo soosaarayaasha | Szlightall
Display LED Lightall Stadium
Dhacdooyinka Ciyaaraha Balaadhan ee Ciyaaraha Kubadda Cagta ee Xayeysiinta Wareegga Wareega
Naqshad saddex-sare ah iyo Saamayn Muuqaal Wanaagsan oo Fiidiyoow Toos ah
Heerka cusbooneysiinta sare illaa 3840Hz, ma jiro xariijin iskaan ah iyo balastar midab leh oo leh kamarad HD ah;
Miisaanka cawlan ee sarreeya ilaa 16 bit, taasoo ka dhigaysa sawirka mid muuqda oo fiiqan;
Iftiin sare illaa 7000 nits, taasoo ka dhigeysa sawirka mid ku filan xitaa qorraxda si toos ah.
Rakibida & dayactirka degdega ah,
Qaab dhismeedka golaha wasiirada oo xoog badan
Qeexid & xallin sare.
Maaskaro shaashad gaar ah oo jilicsan iyo daboolida kabadhka, waxay ka ilaalin kartaa ciyaartoyda in ay dhaawacmaan inta ay ciyaartu socoto.
3.Angle hagaajin karo 75-90 digrii
Qaabdhismeedka Taageerada Dhulka ee Madaxbanaan, Ka Xasilan In ka Badan Sidaad Moodayso
Xagasha qaabdhismeedka taageerada dhulka ayaa loo hagaajin karaa sida aad ugu baahan tahay, si ay ugu habboonaato xagalka daawashada ugu fiican ee dhagaystayaasha iyo kamaradaha.
Nidaamka Xogta Kaabta Kulul
Ansixi labada khad data / xakamaynta naqshadeynta keydka, marka hal xariiq xogta / kontoroolaha uu jabo, khadka xogta / kontaroolaha kale wuxuu bilaabi doonaa inuu si otomaatig ah u shaqeeyo, hubiyo shaqada joogtada ah ee shaashada ee tabinta tooska ah.
Qiimeynta Sare ee IP-ga oo ku habboon Isticmaalka Bannaanka
Waxay labadaba loo isticmaali karaa gudaha iyo dibaddaba, maadaama ay ku qalabeysan tahay teknoolojiyadda ugu dambeysa ee dibadda SMD. Waad ku mahadsan tahay qiimeynteeda IP65 oo buuxa - gabi ahaanba waa biyo la'aan.
Isku xiraha Duulista Hawada Sare
Xirfadlayaasha isku xira duulimaadyada waxay awood u siinayaan fiilo badan iyo furka, waana biyo la'aan buuxda. Waxay xaqiijineysaa xasilloonida iyo kalsoonida shaashadda gaar ahaan munaasabadaha muhiimka ah qaarkood.
Bandhigga garoonka ee hogaaminaya wuxuu ku habboon yahay garoomada kala duwan ee isboortiga, sida xiirashada, maxkamadda kubbadda koleyga, garoonka kubadda cagta, garoonka xeegada, rugby-ga la xareeyay, iyo iwm.
Taxane Products P6 P8 P10
Cabirka golaha wasiirada 960x960mm 960x960mm 960x960mm
Xallinta golaha wasiirrada 160x160 dhibco 120x120 dhibco 96x96 dhibco
Iftiin 6500CD 6500CD 6500CD
Fogaanta ugu fiican ≧ 6m ≧ 8m ≧ 10m
Cufnaanta Pixel 62500 dhibco / ㎡ 40000 dhibic / ㎡ 27777 dhibco / ㎡
Fogaanta ugu fiican ≧ 4m ≧ 5m ≧ 6m
Hore: Muuqaalka 'Lightall Poster LED Display'
Xiga: Muuqaalka Iftiinka Bannaanka Dibadda
Bandhigga Iftiinka 'Lightall Curved LED'
Lightall kirada LED Display 500x1000mm Taxanaha